त्यो मखमली पर्स – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २७ श्रावण २०७७, मंगलवार १६:०८
उहाँको जवाफले मेरो मन सन्तुष्ट पारेन। उहाँको वर्थडे पनि आउँदै थियो। उहाँ त यस्तै हो ह्या चलिराकै छ चलिरहन्छ नै भन्नुहुन्छ तर एउटा पर्स म आफैं किनिदिन्छु भनेर बजारबाट पर्स किनेर ल्याए। बर्ड डेको ‘इभ’ मा सरप्राइज दिन्छु भनेर त्यो पर्स मेरो ब्यागमा नै राखिछोडेकी थिएँ।
तर वर्थडे आउनुभन्दा केही दिन अगाडि उहाँले बर्थ डेको दिन मैले छुट्टी लिएको छु। तर ‘इभ’ चाहिँ अफिसको साथीहरूसँग मनाउनु पर्ने भयो भन्नुभयो।
तर पनि म रातिको बाह्र बजे कुरेर नै बसे र बाह्र बज्ने बितिक्कै उहाँलाई फोन गरे। उहाँले फोन उठाउनुभएन। फेरि फोन गरेँ, फेरि पनि उठाउनुभएन। पाँच मिनेटपछि आफैंले फोन गर्नुभयो, मनमा उब्जेको रिस शान्त पार्दै बर्थ डे ‘विस’ गरेँ।
‘म साथीहरूसँग अझै पार्टीमा छु। आउँदा दुई जति बज्छ होला। तिमी सुत है,’ एक सासमा यति भनेर उहाँले फोन राख्नुभयो।
‘पार्टीमा भएको मान्छेको ब्याकग्राउण्डमा केही आवाज आएन नि,’ मैले सोधेँ।
‘अघि होहल्लामा भएर तिम्रो फोन त सुनिनँ। त्यसैले शान्त ठाउँमा आएर बोलेको। ल ल राख। म एकछिनमा यहाँबाट हिँडिहालेँ।’
उहाँलाई केकको अगाडि राखेर केक काट्न भनेँ। उहाँले ‘केक भोलि छोराछोरीका अगाडि काटौंला नि ल’ भन्नुभयो।
मैले भने, ‘बच्चाबच्चीले आफैंले मन पराएको सानो केक पनि ल्याएका छौं। उनीहरूले त्यो केक भोलि काट्ने, बाबा आइसेपछि हजुर यो केक काट्नु भनेकाले यो तयारी गरेको। नत्र १२ बजे यी दुवै केक एकैपटक काट्ने कुरा थियो।’
‘दुवै केक भोलि काटौंला नि त छोराछोरीका अगाडि,’ उहाँले जिद्दी गर्नुभयो।
‘कुनै कुनै क्षण त मलाई पनि तपाईंको श्रीमती मात्रै भएर बाँच्न मन हुन्छ नि बाबै। सारा संसार भुलेर,’ म भावुक भएर यो शब्द बोलिदिहालेँ।
‘अब यो गिफ्ट पनि छोराछोरी उठेपछि खोल्छु नभन्नु ल। उनीहरूले नै र्‍याप गरेर यो सबै बर्थ डे मेसेज लेखिदिएका हुन्।’
‘मन परेन बाबालाई?’ मैले उहाँको कपाल सुमसुम्याउँदै सोधेँ।
उहाँले मुन्टो हल्लाउँदै भन्नुभयो, ‘मन पर्‍यो। तर आज मलाई अफिसका साथीहरूले पनि पर्स नै उपहार दिएका थिए। कस्तो संयोग भनेर अचम्म मात्रै लागेको हो। यी हेर त, यही पर्स हो।’ उहाँले गोजीबाट नयाँ पर्स निकालेर देखाउनु भयो।
अब अरूले दिएको पर्स बदली सकेपछि मैले किनिदिएको पर्सको केही औचित्य नै भएन नि भनेर मैले मेरोवाला पर्स फुत्त सोफामा फ्याँकिदिएँ। उहाँले त्यो मैले फ्याँकेको पर्स टिपेर ‘ल ठिकै छ नि, तिमीलाई खुसी बनाउन भए पनि म तिमीले दिएको पर्स बोक्छु नि त’ भन्नुहुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो।
‘अनि पुरानो पर्स खै त?’ रिस मनमा दबाएर नै बोलेँ।
‘ऊ त्यो अफिसको झोलामा छ।’
‘अनि पर्समा सबै सामान सारेपछि यो फोटो चाहिँ किन बाँकी राखेको नि,’ मैले अलि आवाज ठूलो बनाएर सोधेँ।
एकदिन अफिसबाट उहाँ एकदमै चिन्तित अवस्थामा घर आउनुभयो र अचानक भन्नुभयो, ‘तिमीले अस्तिनै ल्याइदिएको त्यो पर्स ल्याऊ त। यो पर्स फापेन मलाई।’
तर मैले त्यो पर्स त मेरो भाइलाई दिइसकेकी थिएँ। ‘तेरो भिनाजुलाई ल्याइदिएको, बोक्नुभएन। तँ बोक है’ भनेर मैले त उसलाई उहिल्यै दिइसकेकी थिएँ।
‘त्यसो भए भैगो, यही खल्तीले बोक्छ पर्सको भार अब’ भनेर उहाँले पर्सबाट सबै सामान निकालेर पाइन्टको खल्तीमा राख्नुभयो।
‘त्यत्रो बर्थ डे इभ मनाएर, अफिसका साथीहरूले दिएको यस्तो महँगो उपहार बोकेको नदेख्दा साथीहरू रिसाउलान् नि फेरि?’ मैले उहाँको मन चोर्न यो प्रश्न गरे।
‘रिसाउने साथीहरू अब काम गर्दैनन् र सायद अब भेट पनि हुँदैन होला,’ यति भनेर उहाँ कोठाभित्र जानुभयो।
पसलमा मैले पुरानो पर्स देखाएँ। पसलेले पर्स दायाँबाँया हेर्दै ‘प्योर छालाको रैछ त है दिदी’ भन्यो।
‘यसको मर्मत गर्नुपर्यो भाइ, बरु कति पैसा लाग्छ,’ भनेँ।
‘दिदी यसको बाहिर म घोडाको छाला लगाइदिन्छु। यी हेर्नुस् त खैरो मखमली घोडाको छाला हो यो,’ कुनाबाट एउटा म्याट जस्तो ठूलो चिज निकाल्दै, ‘छुनुस् त, दिदी छुनुस् कति नरम र मखमली छ भनेर देखायो।’
‘पैसा महँगो होला। भयो,’ भनेर मैले पर्स फिर्ता मागेँ।
‘पैसाको चिन्ता नगर्नु न दिदी। हेर्नुस् त पुरानो पर्सहरूलाई यी छालाले मर्मत गर्दा कस्तो राम्रो देखेको’ भन्दै उसले अन्य एक-दुईवटा फोटो र डिस्प्लेमा राखेका पर्सहरू देखायो।
‘भाइ यो खाँट्टी छाला त होइन जस्तो छ। प्लास्टिकको होला, फेरि केही दिनमै खत्तम भयो भने? भइगो’ भनेर मैले फेरि आनाकानी गरेँ।
भाइ ‘मूल्य पछि गरौंला, पहिला पर्स ठीक बनाउने स्वीकृति दिनुस्’ भन्न थाल्यो।
‘फेरि बनाइसकेपछि धेरै मूल्य भन्लाऊ। बरु मूल्य भन अनि मात्रै बनाउन थाल।’
भाइले पाँच औंला देखाउँदै भन्यो, ‘दिदी अरुलाई सात हजार, तपाईंलाई चाहिँ पाँच हजार।’
‘न म तिम्रो आफ्नो दिदी, गोरु बेचेको साइनो त छैन। भर्खरै भेटेको ग्राहकलाई किन यसरी अरुलाई यति तपाईंलाई चाँहि यति भनेर मूल्य गर्छौ? पाँच हजारमा त ब्राण्डेड नयाँ पर्स नै आउँछ। भयो,’ भनेर मैले पर्स फिर्ता मागें।
‘पर्स कतै भेटिएन, अग्नि, खै मेरो मखमली पर्स खोजिदेऊ न’ भन्न थाल्नुभयो।
छोराछोरीले पनि, ‘ड्याडी हजुरको मखमली पर्स यी लिस्यो’ भन्न थाले।
एकदिन गाउँबाट सासूले फोन गर्नुभयो, ‘छोरालाई यो वर्ष साढे सातको दशाले छोएछ बुहारी। तिमीले त्यसका लागि पूजा, पाठ, ध्यान, व्रत, दान गर्नुपर्ने भयो। यो सालको हरेक सोमबार पानी पनि नखाई तिमीले व्रत बस्नुपर्छ भनेको छ पण्डितले। अनि साउनभरि घरमा लसुन, प्याज, माछा, मासु केही नभित्र्याउनु पनि भनेका छन् पण्डितले।’
उहाँ तनावमा नै बोल्नुभयो, ‘तर त्यो पर्स मेरा लागि विशेष थियो। त्यो पर्स हराउनु हुँदैनथ्यो।’ यति मात्रै भनिरहनुभयो।
‘कहाँ दिदी हामीले त आशै मारेका थियौं। धन्य हजुरको हातमा पर्‍यो’ भन्दै दिदीलाई धन्यवाद पनि भनेँ।
त्यससँगै लेखिएको मेसेज थियो- ‘सरी बेबी, तिमीले घर पुगेपछि फोन, मेसेज, केही नगर भनेको थियौ। तर हेर न कस्तो राम्रो तिम्रो सुनको सिक्री उपहार।
आइ लभ यू मेरो बेब्बु।’
‘तिमीले मन्दिरकै धागो ल्याए पनि मलाई मनपर्छ माई लभ। यो त झन् कस्तो महँगो सिक्री छ’ उसको जवाफ आयो।
‘साउन सकिन अझ दुई दिन बाँकी छ, मासुको पो गन्ध छ त अग्नि’ उहाँले टेबलमा मिठाइ र फूल राख्दै भन्नुभयो।
मेरो नजिक आएर उहाँले भन्नुभयो– ‘के भयो तिमीलाई? झन् आज अन्तिम सोमबार, तिमीले मेरा लागि कठिन व्रत बस्यौ भनेर यो सिक्री उपहार ल्याइदिएको छु। तर तिमी किन यस्तो अवस्थामा?’
सुनसान बन्यो पाटन कृष्णमन्दिर : ‘कृष्ण’ले लगाए मास्क, भजनको सट्टामा कोरोना सन्देश
फिल्म छाडेर सिरियल निर्माणमा चर्चित निर्देशक
नग्न दृश्यले मच्चाइन् हंगामा, दाउदसँग जोडियो नाम : कहाँ थिइन् मन्दाकिनी ? फर्किने…